Youth Society for Education Non-Profit Organization Survey
Youth Society for Education Non-Profit Organization
“Impacts of Social Media” Video ပြိုင်ပွဲဝင် လျှောက်လွှာ
ယနေ့ခေတ်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ရေပန်းစားလျက်ရှိသော Social Media ၏ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများကို လူအများသတိထားမိစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး Youth Society for Education မှဦးဆောင်၍ “Impacts of Social Media” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရုပ်ရှင်ပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသောကြောင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
ပထမအကောင်းဆုံးဆု - ၅၀၀၀၀၀ကျ ပ်
ဒုတိယအကောင်းဆုံးဆု - ၃၀၀၀၀၀ကျ ပ်
လူကြိုက်အများဆုံးဆု - ၁၀၀၀၀၀ကျပ်
ပြိုင်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာ၌ တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊အဖွဲ့ လိုက်ဖြစ်စေ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။ အဖွဲ့ လိုက်ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် အဖွဲ့ ဝင်ဦးရေ ၅ ဦးထက်မပိုရပါ။
ပြိုင်ပွဲဝင်လျှောက်လွှာနှင့် Video file ကို စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်လျှောက်လွှာ ဖြည့်သွင်းရန် အခက်အခဲရှိပါက Facebook (Youth Society for Education) မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ပြိုင်ပွဲဝင် စည်းကမ်း နှင့် အမှတ်ပေးပုံ အသေးစိတ်ကို YSE Facebook Page တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
* 1. ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် အဖွဲ့ ဝင် ဦးရေ။
* 2. ပြိုင်ပွဲဝင်သူ (အဖွဲ့ ဝင် ၁)
အထက်တန်းကျောင်း (သို့ ) တက္ကသိုလ်အမည်
မွေးဖွားသည့် နေ့ ရက်၊ လ၊ ခုနှစ်
* 3. ပြိုင်ပွဲဝင်သူ (အဖွဲ့ ဝင် ၂)
* 4. ပြိုင်ပွဲဝင်သူ (အဖွဲ့ ဝင် ၃)
* 5. ပြိုင်ပွဲဝင်သူ (အဖွဲ့ ဝင် ၄)
* 6. ပြိုင်ပွဲဝင်သူ (အဖွဲ့ ဝင် ၅)
* 7. လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်ဆိုထားသော အချက်အလက်များတွင် မသမာမှုတစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါက ပြိုင်ပွဲမှ ထုတ်ပယ်မည်ဖြစ်ပြီး Youth Society for Education မှ တရားဥပဒေအရ ဖြေရှင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
ပြိုင်ပွဲဝင် Video ကို Youth Society for Education Non-profit Organization ၏ Social Media များတွင် ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ရန်ပုံငွေကောက်ခံရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သော်လည်းကောင်း လိုအပ်သည့်အလျောက် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။
လျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်ဆိုထားသော အချက်အလက်များအားလုံးမှန်ကန်ပါသည်။ မသမာမှုတစ်စုံတစ်ရာ တွေ့ ရှိပါက ပြိုင်ပွဲမှထုတ်ပယ်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး တရားဥပဒေအရ ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူညီပါသည်။
Youth Society for Education Non-profit Organization အား ပြိုင်ပွဲဝင် Video ကိုအသုံးပြု ပိုင်ခွင့်(မူပိုင်ခွင့်) ပေးအပ်ရန် သဘောတူညီပါသည်။